လင်းယုန် မဂ္ဂဇင်း | မလေးရှားရောက် မြန်မာများ၏ တံခါးပေါက်
မလေးရှားရောက် မြန်မာများ၏ တံခါးပေါက်
ကဗျာများ ကာတွန်းများ ကျန်းမားရေးနှင့် ဆေးသိပ္ပံ စီးပွားရေးရာ ထူးထူးခြားခြား နည်းပညာ နည်းပညာ အထွေထွေ မလေးရှား မလေးရှားရေးရာ သတင်း သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဟာသ အင်တာဗျူး အယ်ဒီတာ စကား အတွေးအမြင် အထွေထွေ အနုပညာ နှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဆောင်းပါး ဆေးပညာ မြန်မာအလုပ်သမားရေးရာ မြန်မာ့အရေး ၀တ္ထုတို နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံတကာ အနုပညာ နီုင်ငံတကာ
ယခင်တင်ခဲ့သမျှ Select Month October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 February 2011
October 4, 2011 Featured
သြစတြေးလျး တရားရုံးချုပ်မှမလေးရှားနှင့် သဘောတူထားသော ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက် အား ပယ်ချခဲ့ပြီးနောက် ၀န်ကြီးချုပ် Julia Gillard က ယင်း သဘောတူညီချက် အသက်ဝင်ရန် Advertisements
Posted in မလေးရှား, သတင်း.
September 30, 2011 Featured
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာဆိုးဝါးတဲ့ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရလို့ ကျောင်း ဆရာများ ဆရာဝန်များဟာ လမ်းသန့်ရှင်းရေးသမားများ၊ အစောင့်များအဖြစ် တောင် အာဖရိ ကနိုင်ငံမှာသွားရောက်လုပ်ကိုင် နေရပါ တယ်။ သူတို့တွေဟာ လုပ်ခလ စာပိုရကြတဲ့အတွက် နိုင်ငံပြင်ပ မှာ အစေအပါး အလုပ်ကိုပင် လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလုပ် လက်မဲ့ ရာနှုန်းမြင့် တက်လာလို့ ပညာတတ်များဟာ
Posted in သတင်း, နီုင်ငံတကာ.
ကက်ရှမီးယားဒေသ သင်္ချိုင်းမြေပုံများအားစစ်ဆေးရန် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆို
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က အိန္ဒိယထိန်းချုပ်ခံကက်ရ်ှမီးယား ဒေသရှိအမှတ်အသား မရှိသည့် သင်္ချိုင်းမြေပုံများအား လွတ်လပ်စွာစစ်ဆေး ခွင့်ပေးရန် အိန္ဒိယအစိုးရ ကိုတိုက် တွန်းခဲ့ သည်။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့် ရေးအဖွဲ့က လွန်ခဲ့သည့်နှစ်(၂၀)ကျော်က အုတ်ဂူ(၄၀)အတွင်း၊
Posted in သတင်း.
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ရေရှိလျှင် သက်ရှိများလည်း ရှိနိုင်မည်လား
September 28, 2011 Featured
နာဆာ ( (NASA-National Aeronautics and Space Administration) မှ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် ရေရှိနိုင်ကြောင်း လက္ခဏာများ တွေ့ရှိရာ၊ သက်ရှိများလည်း
Posted in သတင်း, သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ.
နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်ကြာလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှည်နိုင်ကြောင်းတင် ပြ
တရုတ်(ထိုင်ပေ)မှ ဆေးသုတေသီများက နေ့စဉ်မိနစ်(၃၀)ကြာ ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းပြု လုပ်ခြင်း သည် မောပန်းနွမ်းနယ်နိုင်စေသဖြင့် နေ့စဉ်(၁၅)မိနစ်မျှ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်ပိုရှည် စေနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်တင်ပြခဲ့သည်။ နေ့စဉ် (၁၅)မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည် သက် တမ်း (၃)နှစ်မျှပိုမိုရှည်ကြာမည်ဟု
Posted in ကျန်းမားရေးနှင့် ဆေးသိပ္ပံ, သတင်း.
လုပ်ငန်းခွင်က ပြန်လာသူတို့ ပြုလုပ်လေ့ရှိသော စိတ်အပန်းဖြေနည်းများ
အလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးအားလပ်တဲ့အခါမှာသင်အကြိုက်ဆုံး အ နားယူနည်းရှိပါသလား။ ဒီလိုမေးခွန်းကိုFacebook Fans တွေကို မေးမြန်း ခဲ့ရာ သူတို့လုပ်နေကျ အလေ့အထတွေကို ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ အိပ်စက် အနားယူသူများ-
September 25, 2011 Featured
တိုင်ယာရာဂျက်ကွေလီနာသည် မလေး ရှားနိုင်ငံ၏အထင်ကရ အောင်မြင်ကျော်ကြားသော မင်းသမီးဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။သူမသည်Puteri Gunung Ledang ဇာတ်ကားဖြင့် အောင်မြင်မှုသရဖူဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်နှင့် အော်ပရာဇာတ်သဘင်များတွင် ထင်ရှား သော သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ တိုင်ယာရာသည်ဗမာသွေးပါသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၇ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် ဗမာ+တရုပ်ကပြား ဖခင်နှင့်အင်ဒိုမိခင်တို့မှ ကွာ လာလမ်ပူမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ တိုင်ယာရာသည် ကျောင်းနေစဉ်အရွယ် ကတည်းကပင် စင်တင်ဖျော်ဖြေမှုများဖြင့် ရင်းနှီး
အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသားငါးဦး ပါဝင်သော လူပုလေး ခုနှစ်ဦး အိမ်တစ်လုံးငှားကာ စုပေါင်းနေထိုင်
ဗြိတ်ိနိုင်ငံမြို့တစ်မြို့ရှိဆင်ခြေဖုံးဒေသတစ်ခု၌ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ခရစ္စမတ်ကာလတွင် ထူးဆန်းသည့်နေထိုင်သူအသစ်များ ရောက်လာ ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းင်းတို့မှာ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသားငါးဦးပါဝင်သော လူပုကလေးများဖြစ်ကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့လူပုကလေးခုနှစ်ဦးစုပေါင်း နေထိုင်ပုံက စနိုးဝှိုက်နှင့်လူပုလေးခုနှစ်ဦး ပုံပြင်ကားကို အမှတ်ရဖွယ် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ ချယ်နယ်(၄)ရုပ်သံဋ္ဌာနက ၎င်းင်းတို့ အား မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါလူပုကလေး ခုနှစ်ယောက်အုပ်စုထဲတွင် ဂျို့ရ်ှဘားနက်မှာ အသက်(၂၀)အရွယ်ဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့လူပုကလေး ခုနှစ်ဦးသည်
Posted in ထူးထူးခြားခြား, သတင်း.
သားအိမ်နှစ်ခုပါသောအမျိုးသမီးက သားအိမ်တစ်ခုစီမှနေ၍ ကလေးတစ်ယောက်စီအမြွာ ပူးမွေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ သားအိမ် နှစ်ခုပါသော အမျိုးသမီးဖြစ် သည့် ရင်ကုဒေ၀ီ (၂၈နှစ်)သည် သြဂုတ်လ(၅)ရက်နေ့က အမြွာ ပူးကလေးကို မွေးဖွားခဲ့ရာ က လေးတစ်ဦးစီသည် သားအိမ် တစ်ခုစီ၌ သန္ဓေတည် ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟုဆိုသည်။ ကလေးနှစ်ဦးသည် မတူညီသောမျိုးဥအိမ်များမှ သန္ဓေ တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်၌ အလွန်ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုဆို သည်။ ရင်ကုသည် ကလေးနှစ်ဦးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရမှန်းသိသော်လည်း
ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံးမော်ဒယ်က ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံး အမျိုးသမီးအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အရီဇိုးနီးယားပြည်နယ်မှ ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံးမော် ဒယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူ ဆူဆန်နီအီမန် (၃၂နှစ်)သည် ဂင်းနက်စ်ကမ္ဘာ့ စံချိန် မှတ်တမ်း အဖွဲ့သို့ သူ့အားကမ္ဘာ့ အ၀ဆုံး အမျိုးသမီးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပေးရန်အမည် စာရင်းတင် သွင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဆူဆန်နီသည် တစ် နေ့လျှင်အစားအစာ ၂၀၀၀၀ ကယ်လိုရီစားသုံးလျက်ရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန် (၇၂၈)ပေါင်ရှိရာမှ (၁၆၀၀)ပေါင် ရှိလာအောင်ကြိုးစားနေသည်ဟုဆိုသည်။ ဆူဆန်နီအီမန်သည် ၀၀လှလှ မိန်းမများကိုကြိုက်နှစ်သက်သော ပရိသတ်များ အကြား ၌ ရေပန်းစားေ နေ သာမော်ဒယ် တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည်သား နှစ်ဦးဖြစ်သော
September 23, 2011 Featured
ကိစ္စရပ်တိုင်းဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဆိုရင် အ ကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် သာမန်ထက် လွန်ကဲလာ မယ်ဆိုရင်ပေါ့၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတတ် ပါတယ်။ လွန်ကြူးတယ်ဆိုတာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ ဦးတည်နေတတ်တာမျိုးပါ။ ဆိုပါစို့ သံယောဇဉ်ဆိုတာကို သာမန်ထက် လွန်လွန်ကဲ ကဲထားတဲ့အခါ ရင်နှင့်အမျှ ပူလောင်ပြင်းပြရတတ် တာ သဘာဝလို့ပဲ ဆိုရမလားမသိ။
Posted in ၀တ္ထုတို.
အယ်ဒီတာ စကား (၇)
“လင်းယုန်”ရဲ့ ပျံသန်းခြင်းခရီး တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ စာဖတ်သူတွေအတွက် အားရကျေနပ်စရာ တွေ ရှိတန်သလောက် ရှိနိုင်သလို အားမလိုအားမရ ဖြစ်ရတာတွေလည်း ရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။ မြင့်မြင့် ပျံနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစား နေကြသလို ခရီးဝေးဝေးကို အတောင်မညောင်းဘဲ အရောက် ပျံနိုင်ဖို့ကို လည်း
ဆင်းရဲခြင်းကို အဆုံးသတ် စေဖို့
အလွန်သေးငယ်တဲ့ငွေကြေးမတည်မှုဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆင်းရဲ ခြင်းကိုအဆုံးသတ် စေပါတယ်။ ၀င်ငွေအလွန်နိမ့်တဲ့လူတွေအတွက် သူတို့ဘ၀ကို ငွေရေး၊ ကြေးရေးမြင့် တင်နိုင်ဖို့ကူညီစီစဉ်ပေးဖို့ နည်းလမ်း ရှိပါတယ်။ အသေးစား ငွေကြေးမတည်စနစ်ဟာ ကျောမွဲလူတန်းစားကိုဆင်းရဲတွင်းကဘယ်လို
Posted in အထွေထွေ, ဆောင်းပါး.
ကိုလက်စထရော အဆင့်လျှော့ချခြင်းနှင့် အစားအစာအရေးကြီးပုံ
September 17, 2011 Featured
ဆိုးဝါးတဲ့ ကိုလက်စထရောတွေ လျှော့ချဖို့အတွက် ကိုလက်စထရောကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့ အစား အစာများ (ပဲပိစပ်နဲ့ပြုလုပ်ထားသောအစားအစာများနဲ့ အခွံမာသီးစတဲ့ အစား အစာ)ကိုသာ အတိုင်းအချင့်နဲ့စားသုံးသင့်ကြောင်း
ရာဂျစ်ဂန္ဒီလုပ်ကြံမှုတွင် ပါဝင်သူသုံးဦးကို ကြိုးပေးမည်
September 15, 2011 Featured
၁၉၉၁ခုနှစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရာဂျစ်ဂန္ဒီအားလုပ်ကြံမှုတွင် ပတ်သက် နေသည့် တရားခံသုံးဦးကိုကြိုးပေးရန်စီရင်ချက်ချမည်ဟု တာဝန်ရှိသူများ ကပြောကြားခဲ့သည်။ ၄င်း တို့အား အကျဉ်းချထားရာ တမီလ်နာဒူးပြည် နယ်ထောင်၊မနက်အစောပိုင်းကြိုးပေးမည်ဟုဆိုသည်။ တမီလ်ကျားအသေခံဗုံးခွဲသူ
ဂါဇာအတိုက်အခိုက်ရပ်စဲရေးကို ပျက်ပြားစေခဲ့သည့် အစ္စရေးတို့၏ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများ
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ၊အစ္စရေး တို့၏တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ပါလက်စ တိုင်းလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်းများစွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ နှစ်ရက်တာကြာ မြင့်ခဲ့သည့် တရားမ၀င် အတိုက်အခိုက် ရပ်စဲရေး ပျက်ပြားခဲ့သည်။ ၂၅ ရက်နေ့ အစ္စရေး တို့၏ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း ပါလက်စတိုင်း နှစ်ဦးသေ ဆုံးခဲ့ပြီး (၂၀)ကျော်
Anwar Ibrahim က Mohd Saiful Bukhari နှင့်လိင်တူဆက်ဆံမှုပြုခြင်းကိုငြင်းဆို
Datuk Seri Anwar Ibrahim ကသူ့ရဲ့လက်ထောက် ဟောင်းဖြစ်သူ Mohd Saiful Bukhari နှင့် လိင်တူဆက်ဆံမှု လုံးဝမရှိခဲ့ ပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Anwar က တရာရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခဲ့တာက တော့ ““ကျွန်တော်ဟာ Mohd Saifil နှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ Mohd Saifil ရဲ့စွပ်စွဲချက်က ဗြောင်ကျပြီး ယုတ်မာတဲ့ လိမ်ညာမှု သာဖြစ်တယ်ဆို တာ မကြာခင်
အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာပြည်သူ့ဥပဒေ ပါမောက္ခ Guy Goodwin-Gill နှင့် ပါလက်စတိုင်းရေးရာ အင်တာဗျုး
September 14, 2011 Featured
ပါလက်စတိုင်းလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင် ရေးအတွက် စက်တင်ဘာလ တွင် ကုလသမဂ္ဂ အဆိုပြု တင်သွင်းမည် ဖြစ်ရာ တရားဥပဒေနည်းလမ်း အရ ဖြစ်ပေါ် ရင်ဆိုင်ရနိုင်မည့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ အခက်အခဲ အန၊ာယ်များအပေါ် အမြင် သဘော ထား အား အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာပြည်သူ့ဥပဒေ ပါမောက္ခ Guy Goodwin-Gill နှင့် အလ်ဂျဇီးရား သတင်းထောက် တို့အင်တာဗျူး မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
Posted in အင်တာဗျူး.
တရုတ်နိုင်ငံသား လူကုန်ကူးသူ များအား ဖမ်းဆီး
September 12, 2011 Featured
ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဥပဒေအရလူကုန်ကူးမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများဟုယူဆရသူ တရုတ် လူမျိုး ၁၆ဦးအား ဂျိုဟိုးဘာရုတွင်ာသြဂုတ် ၆၌ဖမ်းဆီး မိခဲ့ပြီးသြဂုတ် ၁၁တွင် တရုတ် အာဏာ ပိုင်များထံ ၄င်းတို့အား လွဲပြောင်း
တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် နာမည်ကြီး စီးကရက် ကုမ္ပဏီ ဖီးလစ်မောရစ်
တရားမ၀င်ဆေးလိပ်ကြေငြာမှု ၂ခုဖြင့် တရားရုံး ရင်ဆိုင်နေရသော စင်ကာပူရှိ ဖီးလစ်မောရစ် ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီ က ၄င်းတွင်အပြစ်မရှိကြောင်း တရားရုံးတွင်ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ စင်ကာပူ တည်ဆဲဥပဒေအရ လိုင်စင်ရှိသော
အလုပ်သမားများထံမှာ အဖိုးတန်ပစ္စည်း လုယက်သူ မလေးရှားရဲ ၅ဦးအား ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့
September 7, 2011 Featured
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလုပ်သမား၏ အဆောင်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ကာအဖိုးတန် ပစ္စည်းများ အဓမ္မယူငင်ခဲ့သော မလေးရှားရဲတပ်သား ၅ဦးအားသက်သေခံပစ္စည်း များနှင့်အတူ Dang Wangi အရပ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း
မြင့်တက်လာတဲ့ မလေးရှားက အက်စစ်ပတ်တိုက်ခိုက်မှုများ
September 6, 2011 Featured
ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများအားမော်တော်ဆိုင်ကယ် ပေါ်ကနေ အက်ဆစ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှု များဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ယခုတဖန် Kota Kinabalu ၌ အက်စစ်ဖြင့် လှမ်းပက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်များ ကိုနေရာအချိန်မရွေး ဖြစ်ပွား လေ့ရှိကြောင်း
နာဂျစ် အဗ္ဗဒူရာဇက် ဘယ်လဲ ဘာလဲ
September 5, 2011 Featured
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် (ဟောင်း) အာမက်ဘာဒါဝီ ၏ ညံ့ဖျင်းသော ဦးဆောင်မှု ကြောင့် မလေးရှား ၏ စီးပွားရေး လည်း ကျဆင်း နေခဲ့ရ သလို အာဏာရပါတီ ၏ ရေပန်းစား မှုသည် လည်း စတင်ပြိုလဲ လာခဲ့သည်။ ထိုအခိုက် မလေးရှား၏ ကြမ္မာသစ် ကို ဖန်တီး ပေး မည့်သူ တစ်ဦး မားမားမတ်မတ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူကား……..
Posted in မလေးရှားရေးရာ, ဆောင်းပါး.
မလေးရှားရောက် UNHCR အသိအမှတ်ပြု ဒုက္ခသည်များ မှတ်ပုံတင်ရန် အမိန့်ထုတ်ထားခြင်းမရှိဟု ဆို
September 4, 2011 Featured
မလေးရှား ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး Hishammuddin Hussein က တရားဝင် ဒုက္ခသည်များ အား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ရန် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန မှအမိန့်ထုတ် ထား ခြင်းမရှိ ကြောင်းသိရသည်။ ဒုက္ခ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ရုံးချုပ် သို့ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ရန် ရောက်လာကြသော ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀၀ ခန့်မှာ ရုံးချုပ် အပြည့်အ၀ လက်ခံ မဆောင်ရွက် နိုင်သဖြင့်
တရားမ၀င် အလုပ်သမား ၂.၂ သန်းခန့်ကို အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဟု ဆို
September 3, 2011 Featured
တရားမ၀င်နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအား မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးရေးအစီအစဉ် ဖြင့် နိုင်ငံခြားသား ၂.၂ သန်းခန့်ကို မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Hishammuddin Hussein က Biometric နည်းပညာဖြင့် ၄င်းတို့ ကို မှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့၍ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးသော အဆင့်ကို လုပ်ဆောင်နိုင် ခဲ့ကြောင်း
ဝေဖန်ခံနေရသော မလေးရှား နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား ပေါ်လစီ နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအဖြစ် ရည်မှန်း နေသောမလေးရှား အတွက် ဈေးချိုသာသော ပြည်ပ အလုပ်သမား များဖြင့် သူ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု တနည်း GDP မြင့်မားရန် မူဝါဒ ချမှတ်သူများက ဦးစား ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်သားအင်းအား အများအပြား အသုံးပြုရ သော စက်မှု လုပ်ငန်းများ ၊ စိုက်ပျိုး ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ပြည်ပ မှ လုပ်သား
အိမ်ထောင်ပျက်ပေမဲ့ လွမ်းဆွေးမနေတဲ့ ဂျေလို
ဂျင်နီဖာလိုပက်(ဇ်)နဲ့ခင်ပွန်း မာ့(ခ်)အန်ထော်နီတို့ဟာ (၇)နှစ်သက် တမ်းရှိတဲ့အိမ်ထောင်ကို အဆုံးသတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူ ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိ နေကြောင်း သတင်းပေးတစ်ဦး ကPeople မဂ္ဂဇင်းကို ပြောပါတယ်။ ““ဂျင်နီဖာဟာ အိမ်ထောင်သည် မဟုတ်တော့လို့ အရမ်း စိတ်ပေါ့ပါးနေတယ်။ သူငိုကြွေးမနေဘူး။
Posted in သတင်း, နိုင်ငံတကာ အနုပညာ.
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ လျှို့ဝှက်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားမထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
Categories Select Category ကဗျာများ ကာတွန်းများ ကျန်းမားရေးနှင့် ဆေးသိပ္ပံ စီးပွားရေးရာ ထူးထူးခြားခြား နည်းပညာ နည်းပညာ အထွေထွေ မလေးရှား မလေးရှားရေးရာ သတင်း သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဟာသ အင်တာဗျူး အယ်ဒီတာ စကား အတွေးအမြင် အထွေထွေ အနုပညာ နှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဆောင်းပါး ဆေးပညာ မြန်မာအလုပ်သမားရေးရာ မြန်မာ့အရေး ၀တ္ထုတို နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံတကာ အနုပညာ နီုင်ငံတကာ